बुहारीलाई छोरी सहर व्यवहार गर्न भिडियो निर्माण : RajdhaniDaily.com
Home Not-to-be-missed बुहारीलाई छोरी सहर व्यवहार गर्न भिडियो निर्माण
काठमाडौं । लकडाउनका कारण घरमा बसेका श्रोता दर्शकलाई मनोरञ्जनसँगै सन्देश दिने उद्देश्यले गायिका स्वरुपा रसाइलीले आफ्नो नयाँ गीत जसले मलाई…को भिडियो बिहीबार रिलिज गरेकी छन् । भिडियोलाई युट्युबबाट रिलिज गरिएको छ ।
यो गीतमा राजकुमार सुनारको शब्द र बीबी अनुरागीको संगीत रहेको छ । गीतको भिडियो निर्देशन समन अधिकारीले गरेका हुन् । छोरी र बुहारीलाई गरिने व्यवहारको विभेद मेट्न आफूले यो भिडियो तयार गरेको निर्देशक अधिकारीले बताएका छन् ।
गीतको भिडियोमा उनले बुहारीलाई पनि छोरीको जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । भिडियोले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको समनको कथन छ ।
यो भिडियोमा एक महिलाले आफ्नै श्रीमान्ले साथ नदिएपछि भोगेको पीडालाई अधिकारीले प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा गौरव पहारीले श्रीमान र उत्साहा घिमिरेले श्रीमतीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
गौरव र उत्साहासँगै भिडियोमा विशाल पहारी, कमला रेग्मीलगायतका कलाकारको पनि अभिनय रहेको छ । भिडियोमा फराज अर्पणको छायांकन तथा सम्पादन रहेको छ ।
निशाको स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौं । कलाकार तथा मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको नर्भिक अस्पतालका चिकित्सकले बताएका छन् । उनको निशाले केही काम गर्न थालेको चिकित्सकको...
काठमाडौं । सरकारले मनसुन सुरु भएसँगै विपद्बाट हुने घटना न्यूनीकरण्का लागि जोखिम क्षेत्रको नक्सा तयार गरी प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । प्रतिकार्य योजनामा विपद्बाट...
अनुष्काले मलाई शान्त बन्न सिकाइन्
नयाँ दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले अनुष्का शर्मासँग आफूले जीवनमा शान्त हुन र धैर्यधारणा गर्न सिकेको बताएका छन् । अनुष्का विराट...
हत्या गरिएका अवस्थामा चौधरीको शव फेला
इनरुवा । पाँच दिनदेखि बेपत्ता सुनसरी, दुहबी नगरपालिका–३ भीरगाउँका १७ वर्षीय सुजन चौधरीको शव हत्या गरिएका अवस्थामा फेला परेको छ । घरदेखि करीब पाँच...
कोभिड–१९ र पर्दापछाडिको स्वास्थ्य अवस्था
बिचार राजधानी समाचारदाता - April 18, 2020 0
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रारम्भिक संक्रमण मध्य चीनको वुहान सहरमा २०१९ को डिसेम्बरमा भएको थियो । कोरोनाको संक्रमण विश्वभर फैलिन थालेपछि २३...
भारतले हाम्रो भूमी फिर्ता गर्नैपर्छ : मन्त्री अर्याल
राजनीति राजधानी समाचारदाता - June 11, 2020 0
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धहरु छिमेकी मुलुकहरुसँग समदूरीको नै रहने बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी...
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - January 11, 2021 0
राजनीति राजधानी समाचारदाता - February 25, 2020 0
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सदनलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर...
कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलाको शिशुलाई पूर्वमन्त्री बस्नेतले सहयोग गर्ने
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - May 18, 2020 0
मेलम्ची । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकी महिलाको शिशुलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्...
सरकारलाई गगन थापाको प्रश्न : पश्चातापमात्रै गर्ने की प्रतिवाद गर्ने ?
राजनीति राजधानी समाचारदाता - May 10, 2020 0
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद गगनकुमार थापाले सिमानाका बारेमा सरकारले पश्चाताप मात्रै गर्ने की प्रतिवाद गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा...
अनशनरत डा. केसी गल्दै
Uncategorized राजधानी समाचारदाता - October 11, 2020 0
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा २७ दिनदेखि अनशनरत चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नतर्फ गम्भीर कदम नचालेको आरोप सरकारमाथि लाग्न थालेको...
अस्थायी प्रहरी पोष्ट बेल्झुन्डीको सचेतना प्रवाह (फोटो फिचर)
प्रदेश ५ राजधानी समाचारदाता - April 18, 2020 0
दाङ । स्थानीय प्रहरीले लकडाउनको पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । अस्थायी प्रहरी पोष्ट बेल्झुण्डीले लकडाउन उल्लघंन नगर्न भन्दै मोटरसाइकल चालक र मोटरसाइकलमा सवारलाई...
पोखरा ।फेवातालमा सोमबार डुंगा डुब्दा १ जना बेपत्ता भएका छन् । अन्य २ जनाको प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ । तीनजना सवार डुंगा सोमवार...
विजय नेपाल - June 18, 2021